VAROTRA ANDAVANANDRO : Mampitaraina ny olona ny fahataran’ny hena mivoaka eny amin’ny talatalana
Matetika no antoandro hatrany izay vao avoaka eny amin’ny talatalana ny hena. Ny fahataran’ny famonoana omby na kisoa ao amin’ny labatoara no mahatonga izany. 11 janvier 2017
“Tsy izahay mihitsy akory no mahataraiky azy io fa ny lalàna navoakan’ ny tompon’andraikitra, hany ka tsy afa-manoatra izahay”, hoy ireo mpivaro-kena. Lasibatra voalohany ireo toerana fisakafoanana vokatr’izany.
Manaraka azy ireo ny mpivarotra satria tsy lafo araka ny tokony ho izy intsony ny entana amidin’izy ireo fa efa lasa mividy zavatra hafa ny mpanjifa. Ambonin’izay ny fitohanan’ny fifamoivoizana noho ny fitaomana azy io ho ao an-tsena, indrindra isaky ny sabotsy. Tokony hojerena akaiky hatrany, araka izany, ny ora ahafahan’ ireo mamono biby fihinana eny amin’ny abatoara mba hialana amin’ny fijalian’ny mpanjifa.
“Betsaka ny taratasy karakaraina vao afaka mampiakatra omby eny ambony ankalana”, hoy ireo mpivaro-kena. Io fikarakarana taratasy io anefa tsy olana loatra fa ny ora mihitsy no tena mametraka ny fahatarana rehetra rehefa hamono omby.
Efa vita tsara sy mara-penitra ny labatoara amin’izao fotoana izao ary dia tokony hanaraka izany ihany koa ny asa atao rehetra.